Jose Mourinho Oo Iska Beddelay Magacii ‘Special One’ Iyo Midka Cusub Ee Uu La Baxay – Laacibnet.net
Jose Mourinho Oo Iska Beddelay Magacii ‘Special One’ Iyo Midka Cusub Ee Uu La Baxay
Tababare Jose Mourinho ayaa hore iskugu bixiyey magac layaab lahaa oo uu isku sifeeyey 15 sannadood ka hor markii uu Chelsea tababaraha u noqday.
Mourinho ayaa waqtigaas waxa uu la baxay naanaysta ah ‘Special One’, waxaase hadda uu la baxay magac kale oo ka duwan kaas, sababtuna waa waqtiga badan ee uu garoomada ku jiray oo siyey waayo-aragnimo.
Kaddib waqtiyo uu kusoo qaatay FC Porto oo uu la qaaday Champions League, duniduna baratay, waxa uu yimid Chelsea oo ahayd kooxdii uu guulaha horyaalka Premier League ka bilaabay, isla markaana uu isku dhereriyey Sir Alex Ferguson iyo Arsene Wenger oo uu si adag ugula xafiiltamay.
Waxa uu usii dhaafay Inter Milan oo uu u qaaday Champions League iyo Siere A, waxaana ugu xigtay Real Madrid oo uu horyaalka iyo Copa del Rey kula guuleystay ka hor intii aanu imanin Manchester United oo waqtigii uu joogay uu iyagana la qaaday Europa League iyo koobab kale oo maxalli ah.
Tottenham ayaa noqotay kooxdiisii ugu dambaysay oo loo dhiibay sannadkii hore dhamaadkiisa markaas oo Spurs ay shaqada ka caydhisay Mauricio Pochettino.
Xilligiisii ugu horreeyey ee uu Chelsea tegay, waxa shir jaraa’id oo uu qabtay 15 sannadood ka hor uu ka yidhi: “Waxaana ahayd Special One (Qof gaar ah), waxaanu magacani noqday midka ay warbaahinta Spain ugu yeedho.
Tababare Mourinho oo waraysi siinayay Tencent Sports ayaa mar kale la weydiiyey haddii uu wali yahay Special One, kaddib waqtiga badan ee kooxaha badan ee waaweyn uu soo maray, waxaanu Mourinho markiiba la baxay magac cusub, waxaanu yidhi: “Hadda waxaan ahay: “The Experienced One”.
Isaga oo hadalkiisa sii wata waxa uu intaa ku daray: “Tababariddu waxay u baahan tahay maskaxdaada, khibrad aad urursato iyo aqoon oo kaliya kusii wanaajin karta.”